Inona no ho hita sy atao any Merzouga, Maroka | Vaovao momba ny dia
Susana Garcia | | Maraoka
Merzouga dia tanàna kely any atsimo atsinanan'i Maroc izay lasa toerana fizahan-tany noho ny fidirana an-tsampony any ambanivohitra Sahara. Fomba iray idirana amin'ny toerana vitsy mponina ary manakaiky ny fotoana nifandraisan'ny Sahara tamin'i Maraoka. Noho izany dia mety ho lasa iray amin'ireo dia ireo izay nanjary niainana.
Andao hojerentsika ny fomba ahafahanao manao tongava amin'io lafiny io any Maroc, ireo zavatra izay eo akaiky eo sy izay hitanao sy azonao atao ao amin'ilay faritra. Merzouga, na dia toerana kely aza, dia efa lasa tanàna fizahan-tany vonona handray mpizahatany manerantany.
1 Ahoana no ahatongavana any Merzouga
2 Fitsangatsanganana any Merzouga
Ahoana no ahatongavana any Merzouga
La làlana mahazatra indrindra rehefa mankany Merzouga dia mamaky an'i Marrakech, izay iray amin'ireo toerana fizahan-tany indrindra ary toerana ahatongavanay amin'ny fiaramanidina. Tokony holazaina fa lava ny dia, tsy latsaky ny sivy ora, ka raha te-hahita ity toerana ity isika dia tsy maintsy manam-paharetana be. Ary koa, misy fomba maro hahatongavana any Merzouga. Ny iray amin'izy ireo dia ny mandeha bus, izay tena mora vidy nefa mety hanjary fitsangantsanganana mavesatra sy mankaleo be satria zara raha misy fijanonana. Ny safidy hafa dia ny manofa fiara ao amin'ny seranam-piara-manidina Marrakech hamerina azy io rehefa hiverina, satria ny fijanonana eo akaikin'ny toerana toa ny Kianja Jamaa el Fna dia tena sarotra. Ity safidy ity dia lafo kokoa fa raha miverina dia manome antsika fahalalahana bebe kokoa izany raha mahay mitantana tsara amin'ny GPS. Tsy isalasalana fa io no safidy tsara indrindra ho an'ireo mpitsangatsangana. Etsy ankilany, azontsika atao ny mandeha manao fitsidihana voalamina, izay ahafahantsika mijanona am-pahanginana amin'ny toerana sasany toa an'i Ourzazate na mankafy alina any amin'ny toby malalaka. Na dia tsy isalasalana aza fa io no safidy lafo indrindra, nefa koa ahazoana aina indrindra.
Fitsangatsanganana any Merzouga
Raha nisafidy ny hisafidy fitsangatsanganana notarihina ianao dia afaka mankafy toerana tena mahaliana mandritra ny andro maromaro. Ny fitsangatsanganana an-tany mahazatra dia haharitra telo andro eo ho eo ho avy ary hijanona amin'ny teboka manan-danja. Ny iray amin'ireo fijanonana voalohany dia amin'ny tanàna na ksar mimanda manan-danja indrindra ao Maroc, Ait Ben Haddou. Horonantsary toy ny 'The Kingdom of Heaven' dia nalaina sary eto. Ilay tanàna mimanda dia miavaka amin'ny maha-monochromatika azy, miaraka amin'ireo trano adobe avela ho maina amin'ny masoandro. Any amin'ny 190 kilometatra miala an'i Marrakech no misy azy. Androany dia toerana iray nambara ho toerana misy ny vakoka manerantany izy ary miaina ivelan'ny fizahantany, na dia nifindra tany amin'ilay tanàna vaovao am-pita aza ny ankamaroan'ny mponina.
Ao amin'ny fitsidihana an'i Merzouga dia afaka mijanona ao Ouarzazate ihany koa isika. Tanàna tsara tarehy izy ity ary misy fijanonana tsara alohan'ny hidirany amin'ny Atlas sy Merzouga. Eto amin'ity toerana ity isika dia afaka mahita ny Kasbah of Taourirt, ny Kianja Al Mouahidine na ny studio Atlas mahaliana izay naka sary ny sarimihetsika toy ny 'The Jewel of the Nile' na 'Gladiator'. Amin'ny diany mankany Merzouga dia hanohy mamaky ny Lohasaha Dades sy ny Todra Gorges isika, miaraka amin'ireo sary miavaka mahavariana.
Na dia Merzouga aza no tanàna ipetrahan'ireo mitsidika ity tany efitra any Maroc ity, ny marina dia ny Erg Chebbi no tadiavinay. Ny erg dia a teny izay manondro tany efitra noforonin'ny dongom-pasika ary ity no tena manandanja indrindra any Maraoka rehetra. Amin'izay isika dia afaka mankafy ambonin'ny tontolo mahavariana izay omen'ireto dongom-pasika telo-polo kilometatra ireto.
Ny hetsika azo atao amin'ity efitra ity dia maro sy isan-karazany, mahafinaritra kokoa ny tsirairay. Ilaina ny mandeha mamaky ny dongona, saingy tsy vitan'ny tongotra an-tongotra izany, satria lehibe dia lehibe ny fanitarana azy. Voalamina ihany koa ny fitsangatsanganana amin'ny 4 × 4 na quad. Fa ny iray amin'ireo zavatra niainana tsara indrindra dia tsy isalasalana fa mitaingina dromedary handeha eo amin'ireo dongom-pasika ireo.
Ny fialamboly antsoina hoe sandboarding dia mety ho fialamboly lehibe. Ny momba ny fampiasana latabatra no ahafahan'izy ireo manome anao any amin'ny orinasa, mamakivaky ny dongom-pasika. Tsy misy isalasalana fahafinaretana lehibe raha miaraka amin'ny ankizy isika. Toerana tsara hahitana biby koa anefa izy io, satria mety misy amboahaolo aza eo akaiky eo.
Ary farany, iray amin'ireo hetsika tsara indrindra izay hataontsika any Erg Chebbi na any Merzouga dia tsy isalasalana fa hankafy ny haizina amin'ny alina. Izahay dia miresaka momba ny zava-misy fa amin'ny toerana toa an'ity, izay zara raha misy fandotoana maivana dia afaka mankafy lanitra feno kintana isika izay hahagaga antsika tanteraka. Ao amin'ny toerana dia mandrindra ihany koa izy ireo handany alina any an-efitra ka hanjary tsy manam-paharoa tanteraka ny zavatra niainantsika ary mitazona fahatsiarovana manokana an'ity toerana ity izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Africa » Maraoka » Inona no ho hita any Merzouga
Dia mankany Machu Picchu